पीडा कम गर्न सेक्स गर्नैपर्ने विचित्रको रोग लागेपछि....
२ भाद्र २०७४
के तपाईले कहिल्यै सुन्नु भएको छ कुनै महिला वा पुरुषले पीडाका कारण सेक्स गर्छन् । उसको यौन शक्ति देखेर साथीलाई कुनै झट्का लागेको सुन्नु भएको छ ? यदि छैन भने यहाँ त्यस्तै महिलाका बारेमा उल्लेख गरिँदैछ, त्यो पनि यसकारण कि यी महिला विचित्र रोगबाट पीडित छिन् । यो रोगका कारण खुट्टा र पेटको तल्लो भागमा असैह्य पीडा हुन्छ, यो पीडा कम गर्न उनी आफ्नो पार्टनरका…विस्तृत समाचार »
आठ दिनको लिभ इन रिलेशन, ७५ वर्षको उमेरमा धुमधामसँग विवाह
भारतको छत्तीसगढ राज्यको पहाडी कोरवा आदिम जनजातिका दुई वृद्धवृद्धाले जीवनको उत्तराद्र्धमा विवाह गरेर सबैलाई आश्चर्यमा पारेका छन् । लोपोन्मुख पहाडी कोरवा जनजातिमा यो पहिलो विवाह हो । लिभ इन रिलेशनमा ८ दिनदेखि रहेका ७५ वर्षका रतिया राम र ७० वर्षकी जीवन बढीले समाजसँग अनुमति लिएरै विवाह गरेका हुन् । यद्यपि यो जनजाति समुदायमा एक्लो जीवन बाँचिरहेका पुरुषले आफ्नो समाजका कुने पनि एकल महिलालाई चुरा लगाइदिएर…विस्तृत समाचार »
छोरीलाई सहयोग गर्नेको खोजी गर्दाको पोस्ट भाइरल
१ भाद्र २०७४
आफ्ना छोराछोरी कतै गएका हुन् । खर्च अभावमा अलपत्र पर्दा आमाबाबुलाई कस्तो पीडा होला ? अझ यस्तो अवस्थामा कसैले सहयोग गरे सहयोगी प्रति कति अभारी हुँदा हुन् आमाबाबु ? बेलायतको मैनचेस्टरकी एउटा आमालाई यस्तै संयोग परेको छ । अहिले उनी आफ्नी छोरीलाई सहयोग गर्ने सहयोग गर्ने सहयोगीप्रति आभारी मात्र छैनन् उनको खोजीमा छिन् । मैनचेस्टरकी एउटी आमा ती महिलाको खोजीमा जुटेकी छन् जसले रेल टिकटका…विस्तृत समाचार »
​पेनिस म्यूजियमः जहाँ माछादेखि मानिससम्मका लिंग राखिएको छ, लिंग दानको घोषणा गर्छन् मानिस
३२ श्रावण २०७४
संसारको जुनसुकै ठाँउमा जानुहोस् तपाईले अनौठा–अनौठा खालका म्यूजियम देख्न सक्नुहुनेछ । आज हामी तपाईलाई संसारको अनौठो म्यूजियमको बारेमा जानकारी दिन गइरहेका छौँ । जसको बारेमा तपाई पहिले कतै कतै सुन्नुभएको छैन होला, यो हो पेनिस म्यूजियम । आइसल्याण्डको राजधानी रेक्जाविक स्थित ‘आइसल्याण्डिक फ्यालोलोजिकल म्यूजियम’ आफैमा संसारकै एकमात्र अचम्मको म्यूजियम हो जहाँ माछा देखि ििवभिन्न जनावरदेखि लिएर मानिसहरुको समेत लिंगको संग्रह गरीएको छ । यस लिंग…विस्तृत समाचार »
यी हुन् परीक्षामा फेल भएका अरबपति
३१ श्रावण २०७४
जाइल्स फुक्स आफ्नो ए–लेबल परीक्षामा फेल भएका थिए । सधैंझै त्यो साँझ पनि उनका पूरा परिवार खानाखाने टुबलमा भेला थिए । खाना खाने क्रममा उनका पिताले उनलाई केही भनेनन् । जब प्लेटहरु हटाउयो तब उनले छोरासँग भने–जाइल्स म आशा गर्दछु कि तिमी मेहनत गर्न सक्छौ । खराब नतिजा आएपछि अघिल्लो दिन मिस्टर फुक्सले रोजगारीका लागि नर्थम्पटनशायरको सबैभन्दा ठुलो एस्टेट एजेन्ट चेनको ढोका ढकढक्याए । किशोर…विस्तृत समाचार »
सरकारी टीभी च्यानलका समाचार वाचकले आफ्नी गर्लफ्रेण्डलाई लाइभ प्रपोज गरेपछि....
२९ श्रावण २०७४
केही विशेष प्रेम कहानीले संचार माध्यममा स्थान अवश्य पाउने गर्दछन् तर रुसीको एउटा टेलिभिजन च्यानलमा जे भयो त्यो बिल्कुलै फरक छ । ‘ज्वेज्दा टीभी’ का समाचार वाचक डेनिसका लागि शुक्रबारको दिन निकै निराश थियो । किनभने उनीसँग दर्शकलाई बताउने खासै मनछुने कुनै खबर थिएन । त्यसैले उनले आफ्नी गर्लफ्रेण्डलाई लाइभ टेलिभिजनमै प्रपोज गर्ने सोच बनाए । के तिमी मसँग विवाह गर्छौ ? डेनिसलाई थाहा थियो…विस्तृत समाचार »
९१ वर्षको उमेरमा ग्रेजुएट भइन यी ‘हजुरआमा’
२७ श्रावण २०७४
९१ वर्षको बढ्यौली उमेर । छोरी गुमाएको पीडा । र, जिन्दगीभरको प्रतिक्षा । तर, भनिन्छ कि मनैदेखि हारेको पो हार र मनैदेखि जितेको पो जित । थाइल्याण्डकी मिलानले पनि यस्तै गरेर देखाएकी छन् । थाइल्याण्डकी किमलान जिनाकुलले ९१ वर्षको उमेरमा स्नातकको पढाई पूरा गरेकी छन् । र, उनको यो सफलताको पछाडि लुकोको छ, १० वर्षको लगातार मेहनत र अटुट इच्छा । बीबीसीले किमलान जिनाकुलसँग गरेको…विस्तृत समाचार »
विवाहमा हिडेको हेलिकोप्टर जेल पुगेपछि...
‘जानुपर्ने थियो जापान, पुग्यो चीन’ अझ कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भन्ने भनाइ निकै नेपालमा चर्चित छ । तर, बंगलादेशमा यो भनाइलाई अलि बढी नै गम्भीरताका साथ लिइएको पाइयो । बंगलादेशमा एउटा हेलिकोप्टरमा बसेर केही मानिस विवाह समारोहमा जाँदै थिए । पाइलटले गल्तीका कारण हेलिकोप्टरलाई जेलभित्र अवतरण गरायो । जेलको कम्पाउन्डमा हेलिकोप्टर देखेर त्यहाँ रहेका सुरक्षाकर्मीहरु तत्काल एक्सनमा आए । जेल अधिकारीहरुले ठाने कि शायद…विस्तृत समाचार »
‹ First Newer 16 17 18 19 20 Older Last ›